I-FAQ - Great Fun Amusement Equipment Co, Ltd.
1. Ingabe ungumenzi?
Yebo. Singumkhiqizi ochwepheshe okhethekile kwimishini yokudlala futhi ahlobene kusukela ngo-2010.
2. Uyini isikhathi sakho sokukhokha?
Isikhathi sethu sokukhokha esijwayelekile singama-30% njengediphozithi, i-T / T elinganiselayo ngaphambi kokulethwa. Ukuhleleka kwesampula, semukela inkokhelo ngabakwa-PayPal, Western Union, MoneyGram.
3. Sithini isikhathi sakho sokulethwa?
Isikhathi sokulethwa sizoncika kunani le-oda lakho nokuthi mangaki i-oda esisebenza ngalo. Imvamisa isikhathi sokulethwa siba ngezinsuku eziyi-15-30. Kwesinye isikhathi kufanele sandise isikhathi sokulethwa njengoba sinemiyalo emikhulu evela kuhulumeni. Uma udinga amasampula athile, singakuqedela ngezinsuku eziyi-7 uma uphuthumayo.
4. Yini inqubo yokuphepha emikhiqizweni yakho?
Sizocubungula inqubo yokuphepha (i-ASTM F1487, EN1176, EN71, EN 16630) lapho sithuthukisa, sakha, sakha futhi sifaka imikhiqizo. Imikhiqizo yethu ithole isitifiketi esiningi yinkampani yethu kanye namakhasimende.
5. Ungathumela imikhiqizo endaweni yami?
Impela, singakusiza uhlele ukulethwa ezweni lakho. Kepha imvamisa sizohlela ukulethwa ethekwini eliseduzane labathengi ezweni labo bese amakhasimende ahlela ukulethwa ethekwini kuya endaweni yawo.
6. Ngingakwazi ukufaka imikhiqizo ngokwami?
Yebo. Sizokunikeza ngemiyalo yokufaka enemininingwane. Wonke amakhasimende ethu angakwazi ukubeka indawo yokudlala ngokwawo ngosizo oluvela kithi. Kepha endaweni yokudlala enkulu yangaphakathi elingaphezu kwamamitha skwele ayi-200, kungcono ukucela isisebenzi sethu ukuthi sikusize ukuyifaka. Mhlawumbe izindleko zizobe ziphakeme impela kepha zizonciphisa isikhathi kakhulu.
Ngemininingwane engaphezulu, wamukelekile ukuxhumana nathi manje!